मेरै कार्यकालमा बेलकाका सम्पुर्ण सुकुम्बासी परिवारले लालपुर्जा पाउँछन् : मेयर थापा (अन्तर्वार्ता) - हाम्रो शब्द
मेरै कार्यकालमा बेलकाका सम्पुर्ण सुकुम्बासी परिवारले लालपुर्जा पाउँछन् : मेयर थापा (अन्तर्वार्ता)
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बिषय सुकुम्बासी समस्या नै हो ।
करिब नगरको दुइतिहाई परिवारसँग अझै लालपुर्जा नभएको नगरपालिका स्रोतको दावी छ । आफ्नो जमिन नभएकाहरुको समस्या त बिकराल छदैछ , भएकाहरुकोसमेत जमिनमाथि आफ्नो स्वामित्व नै छैन ।
जमिनमाथि आफ्नो स्वामित्व नभएकै कारण हजारौँ परिवारलाई आफनो जमिन उपयोग गरेर ब्यापार–व्यवसाय गर्न कठिन छ । ‘आफ्नो नाममा जमिन भए बैंकले पनि लोन दिन्थ्यो, विभिन्न संघसंस्थाले पनि पत्याउँथ्यो सुकुम्बासीले कसरी आर्थिक स्रोत जुटाएर ब्यवसाय गर्नू ?’ भन्दै विलौना गर्ने थुप्रै सुकुम्बासी छन् ।
यहि समस्यालाई लिएर मेयर दुर्गाकुमार थापा ‘स्वस्तिक’ ले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो ।
त्यस्तै मेयर थापाले आफुहरु समाजवादको यात्रामा रहेको बताएका छन् । समाजवादको यात्रामा बेलका के गरिरहेको छ ? शिक्षा क्षेत्रको हालत के छ ? संस्थागत र सामुदायीक विद्यालय सुधारमा नगरपालिकाको योजना के छ ? समाजवादको यात्रामा रहेको दावी गर्ने नगरविरुद्ध कालो धब्बा लाग्ने गरी उपमेयर राजकुमारी चौधरीले ‘आफ्नै नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ’ भन्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिनूको अर्थ के हो ? यी र यस्तै बिषयमा मेयर थापासँग हाम्रो शब्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यसप्रकार छ ।
मेयरसाव, कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ, तपाईकै उपमेयरले ‘बेलकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ’ भन्नुभएको छ, त्यतैबाट सुरु गरौँ ? तपाईको नगरपालिकामा भ्रष्टाचार ब्यापक छ रे ! कर्मचारीले धमाधम घडेरी किन्दैछन् रे ? तपाईहरुले भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँन डकुमेन्ट भेडेटार लानुहुन्छ रे ?
…(खितिखिति हाँस्दै)… भ्रष्टाचार भनेको केहो सर्वप्रथम त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्यो…. ।
परिभाषामा नजानुन वास्तविकता बताउँनू ?
म भन्दैछु, अधिकृतलाई निस्चित रकम खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ । उपमेयरलाई हुन्छ । वडा अध्यक्षलाई हुन्छ । उहाँहरुले कहाँ खर्च गर्नुभयो त्यो सबै मैले थाहा पाउँने बिषय हुँदैन । मैले साइन गरेर भ्रष्टाचार गरेको छु भने म कारवाही भोग्न तयार छु । उपमेयर ज्यूको तपाईसँगको अन्तर्वार्ता हेरे । उहाँले भ्रष्टाचारको प्रमाण भएको दावी गर्नुभएछ । यदि त्यस्तो हो भने उहाँले मुद्दा हाले भैगो । कार्यकाल सकिएपछि मुद्दा हाल्छु भन्नुभएछ । मलाई किन माया गर्नु ? अहिले नै हाले पनि हुन्छ । गत साउँनमा पनि मैले उपमेयरले भ्रष्टाचार छ भनेपछि ३१ ओटा मिडियाका साथीहरुलाई बोलाएर मेरो ‘नगरपालिकाका सबै डकुमेन्ट जुनसुकै सम्बैधानिक निकाएले छानबिन गरेपनि हुन्छ’ भनेर पनि भनेँ । कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण छ भने पनि ल्याउँनुहोस् कारवाही हुन्छ । मैले गरेको छु भने पनि कारवाही भोग्न तयार छु । सतही आरोप लागाएर नगरपालिकाको बदनाम गर्न त मिल्दैन न नी !
अनि १५ दिन लगाएर तपाईहरुले ६ जना कर्मचारी खटाएर १ गाडी डकुमेन्ट गाइघाटबाट गाडी रिजर्व गरेर भेडेटार पुर्याएर रातारात भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँनुभएको भन्ने उपमेयरको आरोप छ ?
…(खितिखिति हाँस्दै)… यो काल्पनीक आरोपको के खण्डन गरिरहनु लाजमर्दो ! म दिनैपिछे फेसबुक लाइभमा आउँछु । म कहाँ छु दिनभर केके गर्छू । त्यो सबै कुरा जनतालाई थाहा छ । नगरपालिकाका को कर्मचारी भेडेटाए गका छन् भन्नुन ? उपमेयरलाई त्यत्रो थाहा रैछ, किन मेरो माया गर्नू त मुद्दा हाल्नुभएको भए हुन्थ्यो प्रमाणसहित ! ‘भ्रष्टाचार भयो, म राजीनामा दिन्छु’ भन्नुहुन्छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरे मैले पो राजीनामा दिनुपर्ला, उहाँले किन दिनू !
त्यसोभए बेलकामा भ्रष्टाचार भएको छैन ?
हाहाहाहाहा……। मैले भनेँ नी कसैसँग प्रमाण भए ल्याउँनुहोस्, म कारवाही भोग्न तयार छु ।
नयाँ बिषयमा लागौँ, तपाईले यौटा कार्यक्रममा भन्दैहुनुहुन्थ्यो, ‘हामी समाजवादको यात्रामा छौँ ?’
सर्बप्रथम समाजवादको परिभाषा के हो !
प्लिज ! परिभाषा हैन, समाजवादको यात्रामा केके गर्दैहुनुहुन्छ ?
हामीले अपांग दिवसको दिन सबै अपांगलाई ह्वीचियर बाँडेर कार्यक्रम गरेका छौँ । महिला हिंसाको कार्यक्रम मनाइरहदाँ किशोरीहरुलाई साइकल बितरण गरेका छौँ । दशैँमा विपन्न परिवारलाई शुभकामना रित्तो कार्ड होइन, चाडपर्व मनाउँन खाद्यान्न घरघरमा पठाएका छौँ । कसैलाई पनि पढ्नबाट वन्चित पारिएको छैन । निकै विपन्न परिवारका बच्चालाई नगरपालिकाले बिषेश प्राथमिकतामा राखेर हेरेको छ । आबस्यक परेको खण्डमा आर्थिक सहयोगसमेत गरको छ । यस्तै कार्यक्रमलाई म समाजवाद मान्छु । सामुदायीक विद्यालय आफैले स्कुलबस खरिद गरेको छ । त्यो नौलो अभ्यास हो । वडा–वडाले एम्बुलेन्स खरिद गरिरहेका छन् । आदिवासी थारु संग्राहलय निर्माण गरिएको छ । विद्यालयमा अध्यनरत किशोरीहरुलाई एकदिन होइन, बर्षैभरी पुग्नेगरी सेनिटरी प्याड दिएका छौँ । यहि होइन समाजवादको यात्रा ! समाजवादमा कोहि पनि भोगो हुँनु हुदैन । मेरो नगरपालिकामा कोहि पनि नागरिक भोको छैन । गरिव र विपन्न भएकै कारणले कसैले भोको बस्नु पर्दैछ । हामी जनतप्रतिनिधि आउँदा भन्दा अहिले आधा गरिबी घटेको छ । त्यो तथ्यांक हेर्न सकिन्छ, मैले त्यतिकै भनेको होइन । हाम्रोमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको तथ्यांक निकालेर उनीहरु आएपछि कसरी स्वरोजगार बनाउँने भनेर अभियान चलाएका छौँ । उनीहरुले बिदेशबाटै आफुले चाहेको ब्यबसाय रोजेर नगरपालिकालाई इन्टरनेटमार्फत जानकारी गराएभने हामीले त्यसको सम्पुर्ण प्राबिधिक इस्टीमेट तयार पारेर दिन्छौँ । त्यसको लागत कति ? कसरी गर्ने, के गर्ने सबै । तपाईले घरघरमा बाख्रा फामहरु देख्न सक्नुहुन्छ । त्यस्ता व्यवसायका लागि हामीले पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ । म यस्तै कामलाई समाजवादको यात्रा मान्छु । मुख्य कुरा गरिव भएकै कारण कोहि पनि समस्यामा पर्नुहुँदैन भन्ने हो, त्यसमा बेलका गम्भीर र जिम्मेवार छ ।
तस्बिर : हाम्रो शब्द ।
समाजवादी यात्रामा शिक्षा अवस्था चै के छ ? तपाईले भनेको सुन्दै थिएँ, ‘नीजि विद्यालयलाई बिस्थापित गर्छौँ !’ कसरी गर्नुहुन्छ बिस्थापित ? सामुदायीक विद्यालयको बिजोग हामीले देखेका छैनौँ र ?
शिक्षाको बिषयमा अनिवार्य र पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कुनै पनि विद्यार्थीले विपन्न भएकै आधारमा शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित हुन हुँदैन । बेलका नगरपालिका यसमा सचेत छ । नीजि विद्यालयलाई कानुनी अडचन लगाएर बिस्थापित गर्छौँ भनेको होइन । सामुदायीक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएपछि नीजि विद्यालय आफैँ विस्थापित हुन्छन् । तपाईले नीजि विद्यालयको विजोग छ भन्नुभयो, म त त्यस्तो देख्दिन । हामीले विद्यालयमा इ–हाजिरीको ब्यबस्था गरेका छौँ । जसबाट शिक्षक नियमित समयमा आए–नआएको थाहा पाउँन सकिन्छ । बाक्लो अनुगमनको ब्यबस्था गरेका छौँ । छात्रा विद्यार्थीलाई महिनावारी भएको समयमासमेत सहज होस भनेर बर्षभरी पुग्नेगरी सेनेटरी प्याडको ब्यबस्था गरेका छौँ । करिब २ सयजनालाई साइकल वितरण गरेका छौँ । अहिलेनै हामीले सोचेजस्तो शिक्षा बनाउँन नसकिएला, त्यसका लागि समय लाग्छ । तर इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेका छौँ । एउटा सामुदायीक विद्यालयले आफ्नै स्कुल बससमेत गरिद गरेको छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा के मान्यता थियो भने, नीजि विद्यालयले मात्रै बस चलाउँछन्, सामुदायीकले चलाउँदैनन् । त्यो मान्यतालाई तोड्दै शिक्षामा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउँदै विद्यार्थीको सहजताका लागि बस खरिद गरिएको छ । त्यहाँ हामी अरु पनि बस खरिद गर्छौँ ।
स्वास्थ्य अबस्था कस्तो छ नगरमा ?
हामीसँग भएका स्वास्थ्य संस्थालाई ब्यबस्थित बनाउँदै लगेका छौँ । अगि नै भनिहाले वडालेसमेत एम्बुलेन्स खरिद गर्न सुरु गरेका छन् । कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना अस्पताल पनि सञ्चालन गर्दैछौँ । नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप १० शैयाको आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सहज बनाउँन हामीले बेलकाभरीका सुत्केरी, जेष्ठनागरिक र अति विपन्न परिवारलाई एम्बुलेन्समा कुनै शुल्क नलिने भन्ने पनि निर्णय गरेका छौँ ।
बेलकाको प्रमुख समस्या भनेको सुकुम्बासी समस्या हो । त्यो समस्या समाधानका लागि के के गर्दैहुनुहुन्छ ?
यहाँको करिब दुईतिहाई घरपरिवारसँग लालपुर्जा छैन । हामीले चुनाव जितेर आएदेखि नै इमान्दारीपूर्वक सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पहल गरिरहेका छौँ । देशभरमा हाम्रो नगरपालिकालाई मोडलको रुपमा हेरिएको छ । हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गरिरहेको प्रयास देशमै एउटा उदाहरणीय बनिरहेको छ ।
तपाईले केहि समय अगाडि नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड (पुस्पकलम दाहाल) लाई फोन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह पनि गर्नुभएको थियो नी हैन ?
हो, प्रचण्डलाई गरेँ । प्रधानमन्त्री केपी कमरेडसँग पनि कुरा हुन्छ । यो समस्या समाधानमा मैले धेरै नेताहरुलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको छु ।
अनि प्रचण्डले के भन्नुभयो ?
खासमा के हो भने चितवन (प्रचण्डको गृह जिल्ला) मा पनि सुकुम्बासी समस्या छ । पहिला एकपटक उहाँले बेलकामाजस्तै गरी चितवनको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसकारण उहाँलाई मैले टेलिफोनमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छु । उहाँले हुन्छ, आउँनुहोस्, काठमान्डौ आएको बेलामा बसेर सल्लाह गरौँला भन्नुभएको छ ।
कहिले जानुहुन्छ त ?
समय मिलाएर जान्छु । काठमान्डौ आएको बेलामा भन्नु समय मिलाउँला भन्नुभएको छ ।
तपाईकै कार्यकालमा यो समस्या समाधान होला त ?
हुन्छ । मेरै कार्यकालमा बेलकाका सम्पुर्ण सुकुम्बासी परिवारले लालपुर्जा पाउँछन् । कसैले भन्नेगरेको सुन्छु, सक्कली लालपुर्जा पाइँदैन रे । हरियो कि कस्तो दिन्छ रे भनेर । त्यस्तो होइन । सक्कली लालपुर्जा बाँडिन्छ । लामो समयदेखिको बेलकाको सुकुम्बासी समस्या अब लामो समय रहनेछैन ।
तपाइकै कार्यकालमा सम्पुर्ण बेलकाबासी सुकुम्बासी जनताको हातमा लालपुर्जा देख्न पाइयोस् । सफलताको शुभकामनासहित यो बिचार र समयका लागि धन्यवाद, मेयरसाव ।
तपाईलाई र तपाईको अनलाइन परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद । ढुक्क हुनुहोस्, मेरै कार्यकालमा बेलकाका सम्पुर्ण सुकुम्बासी जनताले लालपुर्जा पाउँनेछन् ।